Ndị na-eme ihe na-emepụta ụlọ ahịa na-emepụta ihe & igwe na-ebugharị ụlọ ahịa maka ire | Jack jack
Ulo > Ngwaahịa > Jack Suwn
Gbalịa bulie Jack na-ahụ maka Jack gbara mkpọrọgwụ na ịzụrụ nke ala gị (dịka onye na-ebugharị ụlọ). Ya adịla mgbe ị na-arụ ọrụ na ụgbọ elu ebuliri na-enweghị jack dabara na ebe.
Ihe eji eme ihe rfj-3tqp bu ihe di nkpa na ikike nke ato. Ojiji nke na-ewu ewu ma mechie hydraulics na-ekwe nkwa na ịkpụlata ọnụọgụgụ, ebe nchekwa nke nchekwa na-echebe ndị ọrụ na akụrụngwa. Ọ bụrụ na ị na-ebuli ụgbọala dị oke egwu maka Jack, ọ ga-ada na mberede na gị ma mebie ụbọchị gị. Hydraulics n'ime jack n'ala ala ga-agbadata. Ebe ọ bụ na ị gaghị aga n'okpuru ụgbọ ala na-adịghị na Jack Stand, nchekwa nke onwe gị na nchekwa nke akụ gị ekwesịghị ịdị na-ajụ ajụjụ, ọbụlagodi na ị na-ebulata Jack.